जिउँदो खसीबोकाको खरिद मूल्य निर्धारण, प्रतिकिलो कति ? – Classic Khabar
जिउँदो खसीबोकाको खरिद मूल्य निर्धारण, प्रतिकिलो कति ?
October 1, 2021 124
देउखुरी, १५ असोज -दाङमा ज्यूँदो खसीबोकाको खरिद मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यो वर्ष गत वर्षभन्दा ज्यूँदो खसीको खरिद मूल्यमा प्रतिकेजी रु १५ र बोकाको खरिद मूल्यमा रु ४५ ले वृद्धि गरिएको छ ।बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुवाङको अध्यक्षतामा बसेको मूल्य निर्धारण समितिको बैठकले किसानको मागलाई सम्बोधन गर्दै मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गको हो । बैठकले २५ किलोभन्दा माथिको ज्यूँदो खसीको मूल्य रु ५६५ र २० केजीदेखि २४ केजीसम्मको खसीको मूल्य प्रतिकेजी ५५० निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै १८ केजीभन्दा माथिको ज्यूँदो बोकाको खरिद मूल्य प्रतिकेजी रु ५४५ निर्धारण गरिएको खसीबोका खरिद समिति जनाएको छ ।
दशैँ तिहारका लागि यहाँबाट एक हजार खसी बोेका खरिद गरि काठमाडौँ पठाइने छ । पहिलो चरणमा ६०० दोस्रो चरणमा बाँकी खसीबोका खरिद गरेर पठाउने तयारी रहेको उहाँको भनाइ थियो । खसीबोका यही असोज २२ गते काठमाडौँ पुग्ने गरी पठाउने तयारी भएको छ । लिमिटेडले दशैँ, तिहार र छठपर्वका अवसरमा खसीबोका खरिद गरेर सहुलियत दरमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । योबाहेक खसीबोकाको व्यापार गर्दै आएका व्यक्ति विशेषले पनि व्यक्तिगत सम्पर्कका आधारमा मागबमोजिम काठमाडौँका व्यवसायीका लागि खसीबोका पठाउँदै आएका छन् ।
Prevराजकाज त्यागेर प्रेमीसंग विवाह गर्दै राजकुमारी, ऋण तिर्न नसकेर विवाह रोकिएका कुमरोले राजकुमारीलाई बेहुली बनाउन पाए
Nextपहिला यस्तो थियौ अहिले उपचार गराउन थाइल्यान्ड जाने भयौ, रोल्पा रुकुमका बिरामिको अझै सिटामोल खान नपाएर ज्यान जान्छ (भिडियो सहित)
एक जोडिले सार्वजनिक पार्कमा आफूलाई रोक्न नसकेपछि….
हरि उदासी प्रतिमा तामाङ र सबिताको सम्बन्ध बारे पुन्यले बल्ल मुख खोले, साथीभाइले लडा,उने जुदा,उने गरे (भिडियो)